QMS Department » Technological University (Dawei)
Home » QMS Department
TU(Dawei) is committed to producing qualified engineers through outcome-based education, producing ethical human resources by doing social work and regularly monitoring and reviewing the effectiveness of Q.M.S based on ISO 9001:2015 standard for on-going improvements.
• နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်) သည် Outcome-based education ကိုအခြေခံ၍ အရည်အသွေးပြည့်ဝသော အင်ဂျင်နီယာများကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မည်။
• နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်) သည် လူမှုရေးဆောင်ရွက်ချက်များကို အခြေခံ၍၊ လူ့ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာသော လူသားအရင်းအမြစ်များကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မည်။
• နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်) သည် အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို ISO 9001:2015 စံနှုန်းများနှင့်အညီ သုံးသပ်ခြင်း၊ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်၍ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်မည်။
1. To attain recognition of Quality Assurance for undergraduate programs of Technological University (Dawei) in ASEAN regional level in 2024 and to accomplish 50% of undergraduate program certification by AUN-QA (or) Myanmar Engineering Council (MEngC) Accreditation Committee in 2024.
2. To lessen students dropout rate to less than 6%.
3. To achieve customer satisfaction over 75% according to the University Policy and ISO 9001:2015 standard.
၁။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်) ရှိ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ သည်
သက္ကရာဇ် ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံဒေသအတွင်း အရည်အသွေး အာမခံချက် ရှိအောင် ကြိုးပမ်းရန်နှင့် သက္ကရာဇ် ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် AUN-QA (or) Myanmar Engineering Council (MEngC) Accreditation Committee ဖြင့် အရည်အသွေး အာမခံမှု ထောက်ခံချက် ၅၀%. ပြီးမြောက်စေရန်။
၂။ ကျောင်းသား/သူများ၏ ပြုန်းတီးနှုန်း (dropout) သည် (၆%) အောက်လျော့နည်း
၃။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်) သည် တက္ကသိုလ်၏ အရည်အသွေးမူဝါဒ နှင့်
အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ ISO 9001:2015 စံသတ်မှတ်ချက်အရ သုံးစွဲသူ၏
စိတ်ကျေနပ်မှု (Customer satisfaction) ကို ၇၅% ထက်သာလွန်အောင်